မောငျ(စှယျစုံကမျြး): May 2011
ငါ့ ဘဝကိုတွေးတွေးပြီး ရီကြတယ်..........
ကြွေသွားတဲ့ပန်းတွေက
မြေမှာခသွားတဲ့ငါ့ နှလုံးသားကို
အဖော်မဲ့နေတဲ့ဥသြငှက်လေးက
ငါ့ အဖြစ်ကို သရော်နေလေရဲ့ ..................
မင်းနန္ဒကလည်း ချစ်သူနဲ့ ကွဲတဲ့ 
ငါ့ အဖြစ်ကို သနားနေတာတဲ့ ......................
ရိုမီရိုကလည်း ငါ့ အဖြစ်ကို
ထားသွားတဲ့ချစ်သူကို
အပြစ်မယူဘူး ဆိုပေမဲ့ 
ဒဏ်ရာတွေနဲ့နေသားကျတော့ 
သဘာဝလို့ ပဲ သတ်မှတ်လိုက်တယ်..........................
ဖိုးခွားလေး (ကော့ မူး)
Author Anonymous at 8:10:00 PM2မှတ်ချက်
နင်သိအောင်လည်း သေချာပြလို့ မရဘူး......................
ငါနင်နဲ့ အဝေးကြီးဝေးပေမယ့် 
ငါ့ နှလုံးသားက နင်နဲ့ နီးနေတာ
ငါ့ ကို ခဏခဏ
အညှာမခိုင်ဘူး နင်နဲ့ တွေရင်လေ
အမဲ့ လွန်တဲ့သရက်သီးလို
လေမတိုက်ပဲ လွယ်လွယ်လေး ကြွေကျသွားတာ...................
နင့် အတွက်နဲ့ကျခဲ့ တဲ့ 
နင်ငါ့ နှလုံးသားကို သက်ချစ်တယ်ဆိုရင်လေ
ဓါးနဲ့ မထိုးနဲ့သေနတ်နဲ့ မပစ်နဲ့ 
နောက်ဆုံး မိုင်းလာမခွဲနဲ့မသေဘူး သံမဏိလိုပဲ................................
မုန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားတခွန်းနဲ့ သာ
ငါ့ ၇င်ကို ပစ်ခွဲလိုက်ပါ
အစိမ်းလိုက်ကွဲကျေသွားတဲ့ ငါ့ နှလုံးသားက
ငါ့ နှလုံးသားကို အဆုံးသတ်လိုက်ပါ.................................
ဆန္ဒ အထွေထွေ ရဲ့ကြား
Author Anonymous at 8:03:00 PM0မှတ်ချက်
ပွင့် လန်းစွာရှိ့ နေတဲ့ 
ငါမြတ်နိုးတဲ့ပန်းတပွင့် 
လန်းဝင့် လို့ ဝေနေမလား
တွေ့ ပါပြီ ပန်းနှင်းဆီ
နင် ဖြစ်နိုင်ပါ့ မလားတဲ့ ..........................။
သွေးသန်ရဲရဲ ဆူးသခင်ရှေ့ ဝယ်
နုညံ့တဲ့ ပန်းကို ရက်စက်တဲ့ 
ဆူးတွေက ဝိုင်းရံတော့ 
အညှာမခိုင်တဲ့ငါက
ငါ့ ရဲ့ အချစ်ငါ့ မေတ္တာတွေနဲ့ 
ငါ့ ဘဝကို လည်း မြေသြဇာအဖြစ်
ဆူးသခင်တွေ ဝိုင်းရံနေတဲ့ 
Author Anonymous at 5:24:00 PM 1 မှတ်ချက်
အနိုင်မသေချာတဲ့ပြိုင်ပွဲတစ်ခုကို
ငါရှုံးနဲ့စခဲ့ တယ်................
အကောင်းဆုံးဆိုတာကို ရဖို့ အတွက်
ဒါပေမယ့်ငါကျေနပ်တယ်
ပြန်ရလိုက်ရတဲ့ရလဒ်ကမလှပဘူး
ငါ့ အတွက် နင့် အမုန်းတွေချည်းပဲ.................
အရှုံးတွေပဲ ထပ်တလဲလဲဖြစ်နေတဲ့ ငါ့ရင်ခွင်
အေးချမ်းဖြင်းဆိုတာ ရှိနိုင်ပါ့ ဦးမလား.................
ထားရာနေ စေရာသွားခဲ့ တယ်................
ချစ်တယ်လို့ပြောတာသာကြာတာ
ချိုသာစွာအပြုံးနဲ့နင်ငါ့ ကိုလိုသလိုသုံးခဲ့ တယ်
နင်မလိုတော့ ငါ့ ရင်ကိုစုန်ကန်သွားတယ်.........................
ဒါပေမယ့် အများကြီးတော့ မဟုတ်ဘူး နှစ်မျိုးတည်း
အခုတစ်မျိုး တောကြာတမျိုးနဲ့ လေ.......................
အဲ့ ဒီနှစ်မျိုးထဲ နင်ပါသွားတာ
Author Anonymous at 4:05:00 PM2မှတ်ချက်
ချစ်သူရဲ့ 2..2..ခါးခါး အမုန်းစကားက
ငါ့ရဲ့နှလုံးသား... G3..နဲ့ ပစ်လိုက်သလားပဲ......။။
4..ညီ ပြောတဲ့ စကား
7 sea မှာ မျှောမထားနဲ့......။။
9 one ရဲ့ စလုံးချစ်သူကို နားဆင်ရင်း
နင့်ကို 10 တခြင်းတွေ ရှိနေတယ်..တကယ်.........။။
Author Anonymous at 4:01:00 PM0မှတ်ချက်
မျှော်လင့်ခြင်း ကမ်းပါးတွေ ပြိုပြိုကျ
ငါ့...နှလုံးသား ခပ်ပါးပါးပဲ ကျန်တော့တယ်.......။။
ဝိုင်ဝိုင်းရဲ့ အချစ်ငှက် ကိုပေါ့.....။။
Author Anonymous at 3:51:00 PM 1 မှတ်ချက်
ကြည်လင်တဲ့အပြုံး
အေးချမ်းတဲ့မျက်နှာ
သာယာတဲ့အသံနဲ့ 
သူ့ အလှက အများသူငါမငေးလောက်ပေမယ့်
ငါ့ ရင်ကိုတော့ တကယ်အေးစေတယ်................
လှတမျတ်နှာ ယဉ်တကိုယ်လုံးနဲ့ 
ငါ့ ရင်မှာအမြဲ နေရာယူထားတယ်....................
ချစ်စရာ အသွင်နဲ့ 
သူ့ ရဲ့ နာမည်လေးက....................သဒ္ဒါတဲ့ 
ဖိုးခွားလေး (ကော့ မူး )ရင်တွင်းဖြစ်
စိတ်ညစ်ပူလောင် ငြီးငွေ့ စ၇ာကောင်းသောမျက်နှာကို
စိတ်ညစ်စရာမျက်နှာနဲ့အမြဲတမ်းပျော်နေတာ
သူ့ ရနံ့ ကတော့ မွှေးနေမှာပါ.............
သူ့ အနံ့ ကတော့ ပျောက်မှာမဟုတ်ပါဘူး........
ဒို့ ယောက်ျားတွေကျတော့ ဓားနဲ့ တူတယ်....
မည်သူ့ ကိုမှမရည်ရွယ်ပါ..... သဘာဝတရားကိုရေးပါသည်.....
Author Anonymous at 4:02:00 PM0မှတ်ချက်
ငါ့ အမှားနဲ့ ငါ
ငါလေ နင့် အတွက်မကောင်းခဲ့ ဘူး
နင့် ငါ့ အပေါ်ကောင်းခဲ့ ပါတယ်
နင်နဲ့ ငါစခဲ့ တဲ့ အချစ်ဇာတ်လမ်းက
အခုတော့ အလွမ်းခမ်းနဲ့ အဆုံးသက်လိုက် ပြီလား............။
ငါလေနင့် အတွက်နဲ့ 
အရင်ကအမှား ငါမသိခဲ့ လို့ ပါ
ငါလေနင့် ကိုနောင်တအချို့ နဲ စောင့် နေတာ
နင်ရှိရင် ငါ့ဘဝဟာပြီးပြည့် စုံနေပါပြီ.................
အမှားတွေ့ ပြည့် နေတဲ့ ငါ့ ၇င်ခွင်
အမှန်ကိုမြင်လာတဲ့ တနေ့ မှာ
ငါ့ ဘေးမှာနင်မရှိတော့ တာ
ငါ့ အမှားနဲ့ ငါပဲ ပေါ့ ဟာ.............. ။
Author Anonymous at 6:18:00 PM 1 မှတ်ချက်
မီးသီး၊ မီးချောင်း တီထွင်မှုပေါင်း 1300 မျှ
"အက်ဒီဆင်" အား ဆရာများက
ငါ၏ရင်တွင်း သမ္မတကြီး "လင်ကွန်း"
ရေးခဲရ၏....... စာကြည့်ဖို့ အရေး
သူ့ ဘ၀လေးကို ကြည်ညိုလို့ ..........
2010 ခုနှစ် "ဖိလစ်ပိုင်" မုန်တိုင်နှစ်ကြိမ်
လူ(30) ဘ၀ကိုကယ်ဆယ်လို့ ပေး ဒီကလေးက
(18) နှစ်သား "မာဂယ်လိန်း"......
ဖိလစ်ပိုင်မှ "မာဂယ်လိန်း" အား ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့်..............
Author Anonymous at 6:14:00 PM0မှတ်ချက်
Ctrl +C နဲ့ Copy ယူပီး Ctrl+V နဲ့Paste လုပ်လိုက်ရင်အဆင်ပြေပါကြောင်းအခြေခံ
Author Anonymous at 1:14:00 PM 1 မှတ်ချက်
ဒို့ မြေ(popa) ကို လှမ်းခဲ့ပါလေ
စိမ်းစိုအေးမြ တောတောင်အလှနဲ့ 
ပညာစခန်း 8 တန်းမျှနဲ့ လမ်းခွဲခဲ့ရ
ငါ့ဘ၀ကိုမြှင့်လို့ တင်ပေး အားဆေးတစ်ဆုပ်
စာတစ်အုပ်က " ဘေဘီလုံမှာ အချမ်းသာဆုံးပုဂ္ဂိုလ်"
ဘေဘီလုံနဲ့ ("The Richest Man In Babylon)
ပညာဆိုတာ ကျောင်းမှာတွင်သာ ရှိပါသည်လို့ 
မထင်လေနဲ့ သူငယ်ချင်းရေ အပြင်လောက
ငါ၏မွေးရပ်ဌါနေ (popa) စကားဝါမြေမှ
ဆုတောင်းရင်.... ငါ၏ညီဘွား "သန့် ဇင်ဦး" အား
ဘေးရန်ကင်းစေကြောင်း ဆုတောင်းရင်းနဲ့ .......
နှစ်ပေါင်း(100)တစ်ရာ မသေချာတဲ့ 
ဒီလူ့ ဘ၀ အလည်လာကြတဲ့
လူ၊သတ္တ၀ါ အပေါင်း ဘေးရန်ကင်းကွာ
Author Anonymous at 1:00:00 AM0မှတ်ချက်
နေ့ ရက်တီတေ သံသာရှည်မှာ
Author Anonymous at 11:11:00 PM0မှတ်ချက်
ငါ့ကို စိတ်မဝင်စားဘူးလို့ ပြောတယ်
ညာလို့ မင်းကိုတော့ ငါမုန်းလိုက်ပြီလေ..........။
ဒါပေမယ့် ငါချစ်တဲ့သူ မင်းသိပါ
Author Anonymous at 7:31:00 PM0မှတ်ချက်
ကမ္ဘာလဆန်း ၁ ရက်နေ့ကတည်းက
နိမ့် လိုက် မြင့် လိုက်
မဆုံးနိုင်တဲ့သံသရာထဲမှာ
လူ့ လောကြီးမှာ ရပ်တည်နေရင်
ရွေးစရာလမ်းတွေ ပွင့် နေတယ်
လမ်းဆုံးဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်လည်းသွားလို့ ရတယ်...........
သေတဲ့ မသာဘေး ဘယ်သူကပ်ချင်ကြသေးလဲ
တချို့ က လျှာအရိုးမရှိတိုင်း လျှောက်ပြောတယ်
ဖြစ်နိုင်ရင်တဲ့အာဂတွင်းထဲတောင် ငုံထားမယ့် တဲ့ 
အလကား မရွံမရှာနဲ့ လျှောက်ပြောတာ
သေပြီးရင် အနားကိုမ ကပ်ကြတော့ ဘူး................
အပုတ်ကောင်ကို အရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ 
ခန္တာကိုယ်ကို စွဲလမ်းမူတွေ နည်းပါးအောင်
တဏှာဆိုတာ ကြီးလေ တိုးလေပါ
ဘယ်တော့ မှ လျှော့ မသွားဘူး..............
လိုချင်တာ အားလုံးဟာ တဏှာပဲ
တဏှာ အကြောင်းပြောမကုန်တော့ ဘူး
အဲဒါကြောင့် ပြောတာ လိုချင်တာအားလုံး တဏှာ လို့ ..............
အပြီးပိုင်စွန့် ပြီးမှ ဘု၇ားအဖြစ်ရောက် ရှိ သွားခဲ့ တာလေ
ဘုရားရှင်ဟောတဲ့ တရားတွေထဲ့ မှာ
Author Anonymous at 7:21:00 PM0မှတ်ချက်
ဟိုလိုလို ဒီလိုလိုနဲ့ စပြီး
ဘဝဆိုတာ ပုံသေနည်း မရှိဘူးတဲ့...........။။
ဘဝဟာ ပုံသေမရှိခြင်း ဆိုတာ သိလိုက်တယ်............။။
Author Anonymous at 3:52:00 PM 1 မှတ်ချက်
၀က်ဆိုဒ်ကစာတွေကို တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေးCopy ယူမရအောင်လုပ်နည်း
ဒီနည်းကတော့တိုးတိုးတိတ်တိတ်လေးပါDownload ယူလို့ ရတဲ့စာတွေကိုCopyယူပြီး
ဒီမှာဒေါင်းလုပ်ယူပါ တိုးတိုးတ်ိတ်တိတ်ကပ်စေးနဲနည်း Code
Author Anonymous at 1:13:00 PM3မှတ်ချက်
အဆင်လည်းပြေစက်လည်းသွက်တဲ့ Anti Virus ဆော့ဝဲကောင်းလေးတစ်ခု
မလို့ လက်၇ှိကျနော်တို့ ရုံးတွေတောင်သုံးနေကြတယ်Virusဆောဝဲတွေကကြီးလွန်း
တော့ကွန်ပျူတာကိုနှေးစေတယ်အဲ့ကြောင့်ကွန်ပျူတာမှာ Virus ဆော့ဝဲတစ်ခုပဲရှိ
အတွက်သိသမျှလေးပြန်မျှပေးလိုက်ပါတယ်......။ မိုက်ခရိုဆော့ကထုပ်တာမလို့ မိုက်
Trojansပါအ၀င်စစ်လို့ တွေ့ တဲ့Virus ကိုလည် Remove လုပ်လို့ ရပါကြောင်း..........
ဒီမှာDownload ယူပါ.. Anti Virus Microsoft Security Essentials
Author Anonymous at 6:13:00 PM2မှတ်ချက်
Copy ယူမရသောဝက်ဆိုဒ်ကစာများကိုဒီနည်းလေးနဲ့ ယူမယ်ဆိုရင်
မောင်တို့ ကတော့မီးစတစ်ဖက်ရေမှုတ်တစ်ဖက်နဲ့ မီးနဲ့ ရှို့ လိုက်ရေးနဲ့ လောင်းလိုက်
ပြီးOK ပေးလိုက်ပါအဲ့ဆိုရင် Copy မရတဲ့ ဆိုဒ်တွေမှာ Copy လုပ်လို့ ရပါတယ်ဒါပေ
မယ့် Firefox Setting မှာJava Script ကိုအမြဲတမ်းဖြုတ်ထားရင်Gmail ဖွင့်တဲ့အခါ
Standard View ကြည့်မရဘူး မေးကနေချက်တင်လုပ်မရပါဘူး(စမ်းကြည့်ပါ)၀က်
ဆိုဒ်တွေက Counter နဲ့Java နဲ့ ဆိုင်တဲ့လင့်တွေအလုပ်မလုပ်တော့ဘူးကဲနဲနဲ
Author Anonymous at 3:52:00 PM0မှတ်ချက်
Chatting ချစ်သူများသို့ 
internet ဆိုတဲ့ ကမ္ဘာလေးထဲ မှာပေါ့........။။
online က မာယာများတယ်........။။
လာပြန်ပြီ account သစ်....
မာယာ များကို ရှောင်နိုင်ကြပါစေ........။။
(လူတစ်ယောက်ရဲ့ ရိုးသားမှုကို လိုချင်ရင် ကိုယ်ကိုတိုင်က ရိုးသားပေးလိုက်ပါ)
Author Anonymous at 1:05:00 PM0မှတ်ချက်
အပူတရာ တွေနဲ့ 
နွေ ဖန်ဆင်းခဲ့ တာလားနွေ.............
တောက်ပမှုကင်းတဲ့ငါရင်ခွင်
လင်းလက်မှုမဲ့ တဲ့ငါကမ္ဘာကို
နွေဦးက နွေတ၇ာပူခဲ့ တာလား
မဟူရာညတွေနဲ့ ထားခဲ့ တာလား..........
ဟိုယခင်...နွေနဲ့ တွေ့ တဲ့ ညက
ဝမ်းနည်းစွာနဲ့လမ်းခွဲခဲ့ ကြတယ်.................
ဘယ်နေ့ ပြန်ဆုံမလဲဆိုတဲ့ 
မျှော်လင့် ချက်များစွာနဲ့ 
ငါတို့ ကျောခိုင်းခဲ့ ကြတယ်........................
နွေမျက်နာကို ကိုကြည့် 
ကို့ မျက်နာကို နွေကြည့် ပြီး
လမ်းခွဲခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းတရားကို
နာကျင်ခြင်းဒဏ်၇ာအပြည့် နဲ့ 
လမ်းခွဲခဲ့လိုက်ကြတယ်.........................
အချစ်စစ်နဲ့ မဟုတ်ခဲ့ ပေမယ့် 
ငါတို့ ခိုင်မြဲခဲ့ ကြတာ ၃နှစ်တောင်ကြာခဲ့ ပြီနော်နွေ..............
ငှက်ကလေးရယ် ဥသြလို့ မတွန်ပဲ
နွေဦးလို့ကူပြီးခေါ်ပေးပါလား
ဒီမှာစောင့် နေတာ ရင်ကွဲနေပြီလို့ .........................
ကိုလည်းထပ်ခါထပ်ခါငိုပြီး ခေါ်လိုက်မယ် နွေဦးရေ..လို့ ........
Author Anonymous at 10:09:00 AM0မှတ်ချက်
Websiteတွေမှာကိုတင်ထားတဲ့စာတွေကို Copy မယူစေချင်ရင်
ဒီနည်းလေးကကိုယ်တင်ထားတဲ့ကဗျာတွေစာတွေကိုလွယ်လွယ်နဲ့ Copy မယူအောင်
ကော်ပီယူပြီး Addagadgetကနေ Html/ Java script မှာထည့်ပြီးSave လုပ်လိုက်
ပြီးရင်ကော်ပီယူလို့ မရကြောင်းပြပါလိမ့်မယ်ကိုပေါ်စေချင်တဲ့စာကိုလည်းထည့်လို့ 
ရပါတယ်အနီရောင်နေရာမှပြင်ပေးလိုက်စမ်းကြည့်ပါကျနော်ဆိုဒ်မှာပဲ Right click
ဒီနေရာDownload ယူလိုက်ပါ Can not Copy Code
မင်းတို့ အဖေ သေသွားရင် မင်းတို့ မိသားစုကလေးတင်
၀မ်းနည်းရမယ်မလားမင်းတို့ဘေးအိမ်နားကလူတွေကမင်းတို့ မိသားစုနဲ့ 
ထပ် တူဝမ်းနည်မယ်ထင်နေလားအဲဒါမင်းတို့ အဖေက မင်းတို့ မိသားစုလေး တစ်ခုအတွက်လောက်ပဲအလုပ်လုပ်ခဲတော့... မင်းတို့မိသားစုအတွက် ဆုံးရှုံး
မှု ပေါ့......family lost..... ပေါ့.........။
ဆ၇ာကြီးပီးမိုးနှင်း၊ ရွှေဥဒေါင်း၊မြို့ မငြိမ်း၊ နန်းတော်ရှေ့
ဆရာတင် စိန်ဗေဒါတို့ လို လူမျိုးတွေ သေတာကြတော့ မိသားစုတစ်ခု
လောက်ပဲဝမ်းနည်းရတဲ့ဆုံးရှုံးမှုမဟုတ်ဘူး..... ယဉ်ကျေးမှု တစ်ရပ်ဆုံးရှုံး
သွားတာဖြစ်တဲ့ အတွက်culture lost ပေါ့..........။
တော်ဘုရားကြီး.ဝေဘူဆရာတော်ဘုရားကြီး တို့ပျံလွန်တော်မူသွား
တာကြတော့family lost မဟုတ်၊ culture lost လဲမဟုတ်တော့ဘူး.လူ့ အဖွဲ့ 
အစည်းအတွက်ဆုံးရှုံးမှု့ ဖြစ်တော့.community lost ပေါ့........။
၁၉၄၇ဇူလိုင် ၁၉ မှာ..ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းလုပ်ကြံခံရတာ
ဟာ family lost လား? culture lost လား? community lost လား?
မဟုတ်ဘူး.အမျိုးသားရေးဆုံးရှုံးမှု... national lost.....ပေါ့.......။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၀၀လောက်က အိန္ဒိယနိုင်ငံ ကုသိန္ဒာ
ရုံ မှာမြတ်ဗုဒ္ဒ္စပရိနိဗ္မ္စာန်စံ ယူတော်မူသွားခြင်းဟာ... family lost လား? culture
lost လား? community lost လား?national lost လား? မဟုတ်ဘူး.... လောက
သား ၊ သတ္တ၀ါအားလုံးအတွက် ဆုံးရှုံးမှု....universsl lost ပေါ့.........။
မင်းခုချိန်မှာသေသွားရင် ဘယ်လို ခေါ်မလဲmad lost..
crazy lost ပေါ့ဆန်ကုန်မြေလေး ဆုံးရှုံးမှုပေါ့...ဘာမဟုတ်တဲ့ဟာတွေနဲ့ 
မင်းတို့အချိန်တွေ မကုန်စေနဲ့ .....စဉ်းစားကြည့်ပေါ့.........။
ဦးဘုန်း ရဲ့စကားများထဲမှာ ယူထားပါသည်။
Author Anonymous at 10:35:00 PM3မှတ်ချက်
Antivirus ဆော့ဝဲတွေထဲကတစ်ခုပါ Virus ၀င်ရင်တစ်ခုမရတစ်ခုနဲ့ ရှင်းဖို့ 
Virus ၀င်ရင်ရှင်းဖို့ ဆော့ဝဲကောင်းလေးတစ်ခုပါတစ်ခုမရတစ်ခုနဲ့ ရှင်းလို့ ရတာပေါ့
အသုံးလိုရင်သုံးဖို့ နဲ့ လေ့လာဖို့ တင်ထားလိုက်ပါတယ်လိုချင်ရင်ဆွဲထား.....။
ဒီမှာDownload ယူပါ Spy boot Antivirus
Author Anonymous at 9:01:00 AM0မှတ်ချက်
သီချင်း ကြိုက်တဲ့နင့် က်ို
ငါဂစ်တာတီးပြီး သီချင်းဆိုပြခဲ့ တယ်.......
ကဗျာကြိုက်တဲ့ နင့် ကို
ငါကဗျာတွေ ရွတ်ပြခဲ့ တယ်...................
အက ဝါသနာပါတဲ့ နင့် ကို
ငါမင်းသားလို့ကပြခဲ့ တယ်...................
နင်ပြုံးခိုင်းတိုင်း ငါပြုံးပြခဲ့ တယ်
နင်ငိုခိုင်းတိုင်း ငါငိုခဲ့ တယ်
နင်ရီခိုင်းတိုင်း ငါ၇ီပြခဲ့ တယ်
နင်မေ့ ခိုင်းတိုင်း ငါမမေ့ နိုင်တာကိုတော့ ခွင့် လွတ်ပါ........
နင်မေ့ထားခဲ့ တဲ့ 
ငါရယ် ငါ့ ရဲ့ ဂစ်တာအိုလေးရယ်
ငါ့ ရဲ့ ကဗျာစာအုပ်လေးရယ်
ငါ့ အလွမ်းတွေနဲ့တခန်းလုံးပြည့် နေတယ်.....................
အလွမ်းတွေကို ဖော်ကြူးတဲ့ 
ငါ့ ရဲ့ ဂစ်တာအိုလေးနဲ့ 
နွမ်းလျှ ကျေကွဲတဲ့ နှလုံးသားသံစဉ်နဲ့ သီဆိုလိုက်တာ............
လောကြီးတောင်ငါ့ အလွမ်းတွေ့ ကြောင့် 
အကျည်းတန်သွားခဲ့ တယ်.................. ။
Author Anonymous at 6:52:00 AM0မှတ်ချက်
လောကကို အရွဲ့ မတိုက်နဲ့ 
မင်းပဲ စောင်းသွားလိမ့် မယ် သူငယ်ချင်း...........
အရိပ်လိုလျှင် နေပူမှာစောင့် 
အနာခံမှ အသာစံရမယ့် 
ငါတို့ ဘဝတွေပဲလေ သူငယ်ချင်း...............
မင်းလျှောက်ခဲ့ တဲ့ လမ်း
တော်ပြီဆက်မလှမ်းချင်ဘူးလို့ ပြောဦးမလို့ လား.......
လူတွေရဲ့ မာယာကြားထဲမှာ
သီးခံခြင်းဆိုတဲ့လက်နက်ကိုကိုင်
မေတ္တာတရားတွေနဲ့...လူတွေကို
ငါတို့မှာ ဥာဏ်နဲ့ ဝရိယ ရှိတယ်လေ
အဆုံးမှာ ငါတို့ အတွက်
ပျော်စရာတွေ ကလက်တကမ်း မှာပါ................
ငါတို့ ရဲ့ပန်းတိုင်ပဲ မဟုတ်လား......?
စိတ်မပျက်နဲ့ စိတ်ညစ်စရာလည်းမတွေးနဲ့ ............
Author Anonymous at 10:14:00 PM 1 မှတ်ချက်
( သတိရခြင်းတွေနဲ့ အလွမ်းတွေကိုမုန်းတယ်..
Author Anonymous at 9:51:00 PM2မှတ်ချက်
အမေဆိုတာသားတို့ သမီးတို့ အတွက်သူရဲကောင်းပါ(8.May အမှတ်တရ)
အမေဆိုတာသားတို့ သမီးတို့ အတွက်သူရဲကောင်းပါ..မေမေရယ် ။ ။
သစ္စာမဖောက်တဲ့…….မောင်(ခေတ္တလူ့ ပြည်)အမေနေ့ အမှတ်တရရေးခဲ့သည်
Author Anonymous at 4:23:00 PM 1 မှတ်ချက်
Author Anonymous at 2:50:00 PM 1 မှတ်ချက်
ဆုတောင်းပေးလျှက်ပါ အမေ....(8/5/2011အမေနေ့ အမှတ်တရ)
မေလ 8- ရက်နေ့ သည် နိုင်ငံတကာ အမေနေ့ဖြစ်ပါသည်။
အမေနှင့် အမေနေ့ သို့ အမှတ်တရ
Author Anonymous at 1:28:00 PM0မှတ်ချက်
Author Anonymous at 6:30:00 AM 1 မှတ်ချက်
၀င်နေတဲ့ Virus ကိုရှင်းဖို့ နဲ့ မ၀င်လာအောင်တားဖို့ ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ
ဒီဆော့ဝဲလေးကကွန်ပျူတာထဲမှာဝင်နေတဲ့ ဗိုင်းရပ်တွေကိုရှင်းထုတ်ဖို့ နဲ့ မ၀င်လာ
အောင်တားဖို့ ကောင်းပါတယ်ကျနော်သုံးကြည့်တာမဆိုးဘူးဗျကောင်းလွန်းလို့ လက်
တို့ တာကွန်ပျူတာနှေးနေတာVirus တွေဝင်နေလို့ လည်းဖြစ်တတ်ပါတယ်ရှင်းကြည့်
ဒီမှာDownload ယူပါ Anti Malware Bytes Virus Remover
Author Anonymous at 4:18:00 PM0မှတ်ချက်
မာန ဆိုတဲ့ အလံ ကို အောက်ချ...
ငါ ဆိုတဲ့ အတ္တ မရှိဘူး................။။
(မည်သူ့ကိုမျှ မရည်ရွယ်ပါ....နာမည်တူ ရှိက ခွင့်လွှတ်ကြပါဗျာ....ငှဲ..ငှဲ..ငှဲ)
Author Anonymous at 4:17:00 PM0မှတ်ချက်
ကွန်ပျူတာထဲVirus မ၀င်စေဖို့ အတွက်ဆော့ဝဲကောင်းလေးတစ်ခုပါ
ကွန်ပျူတာတိုင်းမှာ Anti Virus ဆော့ဝဲရှိကြပါတယ်မရှိသေးရင်တော့ထည့်ထားပေး
ဒီမှာDownloadယူပါ AVG 2011 Anti Virus latest Version
Author Anonymous at 1:19:00 PM0မှတ်ချက်
အမေ့ မေတ္တာကို မှီနိုင်ဦးမှာလဲ............
မိဘမေတ္တာက ပိုလို့ ကြီးခဲ့ တယ်...........
တုန့် ပြန်ရင်နိုင်ပဲ ကျေနပ်ပါပြီ....................
အမေ့ ကျေးဇူးတွေဆပ်ချင်လို့ ပါ..............
Author Anonymous at 10:35:00 PM 1 မှတ်ချက်
Computer မှာ Virus ရှိမရှိစစ်ဖို့Security 360 ဆော့ဝဲကောင်းလေးပါ
Antivirus ဆော့ဝဲကောင်းလေးတွေ့ ထားလို့ မျှဝေလိုက်ပါတယ်Free ပေးထားတာပါ
သုံးရတာပေါ့ပေါ့ပါးပါးလေးနဲ့ အသုံးဝင်ပါတယ် ကျနော်စစ်ကြည့်တာတော့Virus
တွေ့ တယ်အသုံးလိုတဲ့သူတွေအတွက်တင်ပေးလိုက်ပါတယ် Ram Memory နဲတဲ့
ဒီမှာDownload ယူပါ Security 360 Anti Virus
Author Anonymous at 2:08:00 PM 1 မှတ်ချက်
ယုံကြည်နေရင်း....................။ ။ ။ ။ ။
Author Anonymous at 6:16:00 PM 1 မှတ်ချက်
Author Anonymous at 10:22:00 PM0မှတ်ချက်